UNITED NATIONS ASSISTANCE MISSION IN SOMALIA (UNSOM) Waxay soo bandhigeysaa shaqo ka banaan: KAALIYAHA MADAXA ARRIMAHA SIYAASADDA – JOWHAR | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
UNITED NATIONS ASSISTANCE MISSION IN SOMALIA (UNSOM) Waxay soo bandhigeysaa shaqo ka banaan: KAALIYAHA MADAXA ARRIMAHA SIYAASADDA – JOWHAR
TAARIIKHDA KAMA DAMBEYSTA AH: 21 MAARSO 2018
TAARIIKHDA SOO SAARISTA: 22 FEBRAAYO 2018
MUDDADA HESHIISKA: HAL (01) SANO OO MUDDO GO’AN AH
LAMBARKA OGEYSIISKA SHAQADA BANNAAN: UNSOM/PAMG/016/2018
Booskan waxaa la maalgelinayaa muddo hal sano oo kaliya, waxaana suuraggal ah in la muddo kordhin lagu sameeyo. Magacaabista booskan waa mid maxalli ah. Qofka shaqada raadsanayo ayaa mas’uul ka ah dhammaan kharashka ka bixi doona si uu ula wareego shaqadan. Dhammaan dadka soo codsanayaa waxaa si weyn loogu boorrinaya in ay codsigooda ku gudbiyaan habka internet-ka sida ugu dhaqsiyaha badan iyo ka hor inta aan la gaarin taariikhda kama dambeysta ah ee lagu gudbin karo codsiga.
Booskan waa boos ka bannaan Howlgalka Kaalmeynta Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOM) ee Jowhar. Qofka booska ku guuleysta waxaa uu hoos imaan doonaa Madaxa Xafiiska ee Beledweyne.
In uu uruuriyo, xulo uuna falanqeeyo macluumaadka ku jira qoraallada iyo daabacaadyada laga helo ilaha kala duwan, oo ay ka mid yihiin saxaafadda. In uu si weyn uga war haayo guud ahaan dhacdooyinka la xiriira arrimaha siyaasadeed, gaar ahaanna saameynta ay ku leeyihiin waddamada iyo waajibaadyada khaaska ah ee uu shakhsiga u xil saaran yahay.
In uu si dhow ula socdo waxyaabaha ugu dambeeyay iyo dhacdooyinka ka dhaca goobta uu ka shaqeeyo, uuna talo siiyo Madaxda Sare iyo shaqaalaha kale ee ka tirsan howlgalka, iyo meelaha kale ee Xoghaynta markii loo baahdo.
In uu la socdo isbeddellada dhinaca siyaasadda ee heer qaran iyo heer gobol, uuna talooyin siiyo hay’adaha ka howlgala goobta/Qaramada Midoobay.
In uu xiriir dhowr oo ku aaddan isku-duwidda iyo arrimaha siyaasadda uu la yeesho waaxyada kale ee Qaramada Midoobay, iyo hay’adaha caalamiga ah, iyo dowladaha.
In uu ka qayb-galo howlaha xaqiiq raadin ah iyo howlaha kale ee goobta loo xil saaray.
In uu diyaariyo kulammada Wakiilka Gaarka ah ee Xog-Hayaha Guud ee Qaramada Midoobay iyo Ku Xigeenka Wakiilka Gaarka ah ee Xog-Hayaha Guud ee Qaramada Midoobay ay la yeelanayaan Madaxda dalka uu joogo.
In uu qabto waajibaadyada kale ee la xiriira sida loo baahdo.
Waxbarashada: Shahaado Sare ee Jaamacadeed (Master-ka iyo wixii u dhigma) ee Sayniska Siyaasadda, Maamulka ama Horumarinta ama wixii la xiriira. Shahaadada jaamacadda ee heerka koowaad iyo labo sano oo shaqo ah waa la oggolaan karaa beddelka shahaaddada sare. Tababar xirfadeed ee dhinaca qorshaynta, kormeerka iyo qiimeynta, abaabulka iyo/ama isku duwidda waxa ay sare u qaadayaan fursaddaada.
Khibradda: Ugu yaraan labo (2) sano oo uu qofku waayo-aragnimo macquul ah ka helay sayniska siyaasadda, xiriirka caalamiga, sharciga, hubka dhigista, amniga, maamulka horumarinta, xallinta khilaafaadka, iyo wixii la xiriira.
Luuqadda: Ingiriis iyo Faransiis ayaa ah luuqadaha shaqada ee Qarammada Midoobay. Booskan waxaa loo baahan yahay qof fasIIx ku ah luuqadaha Ingiriiska iyo Af-Soomaaliga (hadal iyo qoraalba).
Dadka u qalma shaqadan waxaa ay ku soo gudbin karaan codsiyadooda oo ay qayb ka tahay foomka Taariikhda Shakhsiyeed ee Qaramada Midoobay (P.11) cinwaanka hoose markii la joogo ama ka hor taariikhda kama dambeysta ah. P11 waxaa aad ka heli kartaa https://unsos.unmissions.org/jobs. Codsiyada la soo gudbiyo kaddib wakhtiga kama dambeysta ah ee ah 21 Maarso 2018-ka lama aqbali doono. Warqadaha taarikh nololeedka dadka (CVs) lama aqbali doono.
Fadlan ku lifaaq nuqulka P11, Shahaaddada Jaamacadda, Baasaboor ama Teesaraha Aqoonsiga. Nuqulka Leesenka Baabuurta. Fadlan ogow in Shahaadooyinka Waaxda Dembi Baarista (CID-da) iyo Hay’adda Sirdoonka iyo Nabad-sugidda (NISA)loo baahan doono qaybaha dambe ee hannaanka shaqaaleynta.
Previous articleUNITED NATIONS ASSISTANCE MISSION IN SOMALIA (UNSOM) launches Job for: ASSOCIATE POLITICAL AFFAIRS OFFICER – JOWHAR
Next articleMeletariga Nigeria oo Badbaadiyay 76 Gabdhood oo u Afduubnaa Boko Haram